Mayelana nathi - iRaymin Display Products Co., Ltd.
IRaymin Display igxile ku-R & D egcizelele, ukukhiqiza nokuthengisa izitendi zokubonisa iphepha, amabhokisi ezipho nezinye izixazululo zokupakisha zokubonisa. Kuze kube manje, sikhonze amakhasimende angaphezu kwayinkulungwane asekhaya nakwamanye amazwe. Ukusuka ekupakisheni komkhiqizo kuya ekubonisweni komkhiqizo, sihlala sithatha izidingo zamakhasimende njengezinto eziholayo futhi sihlanganisa okungokoqobo ukwenza uhlelo lokufaka lomkhiqizo oluyingqayizivele. Kuma-oda athengiswa phesheya kwezilwandle, kucatshangelwa izindleko zabasebenzi bezwe lekhasimende, sihlinzeka ngohlelo lokupakisha oluzwakalayo, ukwenza ngokwezifiso ibhokisi lepulagi, ukuvikelwa kwekhoneni nebhodi lamakhadi ku-oda ngalinye, ukuqinisekisa ukuthi umhlangano wezinhlangothi ezintathu isibonisi somkhiqizo ngemuva kokuthunyelwa Kusengafinyelela esitolo esiqokiwe sekhasimende sinjalo. Izicelo zomkhiqizo ezinikezwe inkampani yethu zifaka phakathi izitolo, izitolo ezinkulu, imibukiso, amahhotela nezinye izindawo zomphakathi. Ukuboniswa kweRaymin kugcizelela kubantu, kugqugquzela ukwenziwa kwezinto ezintsha, futhi kwenza konke okusemandleni ukuhlinzeka amakhasimende ngokufaka okulula, ukupakisha okusebenzayo nokusebenzayo nokubonisa izixazululo.
Uma sibheka ikusasa, iRaymin Display izonamathela ekuqhubekeni komkhakha njengecebo elihola phambili lentuthuko, iqhubeke nokuqinisa ubuchwepheshe, ukuphathwa kokuqanjwa kanye nokuqanjwa okusha njengokuwumgogodla wohlelo lokuqamba izinto ezintsha, futhi balwele ukuhlinzeka amakhasimende omhlaba wonke ngamaphakeji afanele kakhulu khombisa izixazululo.
Culture Amasiko ethu ezinkampani
Selokhu kwasungulwa iRaymin Display ngo-2012, iqembu lethu lokukhiqiza neR & D selikhule lasuka eqenjini elincane laya kubantu abangama-300. Indawo yefektri ikhule yaya kumamitha-skwele angama-50.000, futhi inzuzo e-2019 ifinyelele kuma-dollar ayi-25.000.000 e-US ngasikhathi sinye. Manje sesiyinkampani enesilinganiso esithile, esihlobene kakhulu namasiko ezinkampani zethu:
1. Uhlelo lokucabanga
Umqondo oyinhloko "ugxile kubantu, ikhasimende kuqala".
Inhloso yenkampani "Ukubambisana kweWin-win kanye nensizakalo ephelele."
2. Izici eziyinhloko
Dare to innovate: The main character is dare to venture, alinge ukuzama, alinge ukucabanga futhi wenze.
Gcina ubuqotho: Ukuphakamisa ubuqotho kuyisici esiyinhloko seRaymin Display.
Ukunakekela abasebenzi: tshala imali eyizigidi eziyishumi zama-yuan minyaka yonke ukuze uqeqeshelwe umsebenzi, usethe isitsha senkantini sabasebenzi, futhi unikeze abasebenzi ukudla kathathu ngosuku mahhala.
Yenza okusemandleni ethu: I-Raymin Display inombono omuhle, idinga izindinganiso zomsebenzi eziphakeme kakhulu, futhi iphishekela "ukwenza zonke izixazululo zibe yimikhiqizo esezingeni.
Isikhathi Sokuthuthukiswa Kwenkampani
2013 Le nkampani ifinyelele esivumelwaneni neGuangdong Fenggao Printing Technology Co, Ltd. futhi yaba ngumlingani wayo ebhizinisini.
2016 Ithimba lenkampani i-R & D lisungule isixazululo sesekhondi elilodwa lesitendi sokuma, ebelithandwa kakhulu futhi esaziwa ngamakhasimende.
2018 Le nkampani isidlulile isitifiketi se-BSCI futhi yathola ukugunyazwa kokukhiqiza nokuphrinta komkhiqizo wakwaDisney.
2019 Le nkampani yethule uhlelo lokuphathwa kombala lwe-GMI ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zokuphrinta nokufanisa imibala ukuqinisekisa ukuthi imibala yalo yomkhiqizo isesimeni esihle kakhulu.
2020 Imishini yenkampani yokuqala yokuphrinta eyi-3, imishini emithathu kabhiya ephathekayo, imishini yoku-laminating yamaphepha ayi-3 ezenzakalelayo, umshini wokushicilela we-CTP ongu-1, umshini wokunamathisela o-1, imishini emibili yokunamathisela ibhokisi, nomshini owodwa wokusika. Kwengezwa umshini wokunyathelisa uyinki we-flexo ngesisekelo.
1.Isakhiwo Sesimanje Sokwakhiwa Kwefekthri: Sine-workshop engaphezu kwamamitha-skwele angama-50,000, ifakwe isethi ephelele yomshini wokukhiqiza nowokukhiqiza, kusuka ekuphrinteleni kuya ekubhintekeni kwebhokisi.
2.Isipiliyoni: Iminyaka engaphezu kwengu-20 yokukhiqiza isipiliyoni ekubonisweni kwamakhadibhodi kanye nesipiliyoni sekhwalithi yokupakisha iphepha. Sisebenza kahle ekuhlanganiseni nasekupakisheni imikhiqizo yokubonisa ama-racks, ukusiza amakhasimende ukuthi agcine izindleko zabasebenzi eceleni kwabo.
3. Ukuhlolwa Kwezitifiketi: ISO9001, FSC, BSCI, Disney, Walmart
4. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi: Sisebenzisa uhlelo lokuphathwa kombala lwe-GMI ukufanisa umbala; futhi usebenzise imishini yokuhlola ingcindezi onqenqemeni namandla okuqhuma kwamakhadibhodi.
5. Uchungechunge lwesimanje lokukhiqiza: Imishini yokusebenzela ezenzakalelayo esezingeni eliphakeme, kufaka phakathi imishini eyodwa yokukhiqiza yokwenza ukwenziwa kwesikhunta, ukuphrinta, ukwelashwa ngaphezulu, ukukhwezwa, ukunamathisela nokunamathisela.